FIJALIAN-DRANO : Nitokona ireo mpianatr’Ankatso, mangataka vahaolana maharitra izy ireo
Nitokona nanatanteraka fihetsiketsehana ireo mpianatry ny Oniversite Ankatso, ny sabotsy 19 desambra maraina lasa teo iny. 21 décembre 2020
Ny olan’ny rano izay tsy mbola voavaha ara-dalàna mandraka ankehitriny no antony nampirehitra ny hatezeran’izy ireo ka niray hina nitokona, vory lanona teny amin’ny manodidina nanomboka tamin’ny valo ora maraina.
Nobahanan’ireto farany moa tamin’io fotoana io ireo fiarabe siterna mpitatitra rano tonga namatsy teny an-toerana. Nanamafy izy ireo fa vahaolana maharita ary matotra no tadiavina mba tsy hiverimberenan’ny olana efa matetika loatra ny zava-misy. Tsy eken’izy ireo ary nolaviny tanteraka ny famatsiana rano avy amin’ireo fiarabe satria miteraka fandaniam-potoana fotsiny ihany, hoy hatrany ny fanazavana voaray.
Mangataka amin’ny tompon’andraikitra mahefa mba hijery akaiky ny raharaha, indrindra fa ny fametrahana vahaolana maharitra. Tonga teny an-toerana moa ny mpitandro filaminana nandamina ireo mpianatra ireo ho fisorohana ny mety ho fikorontanana.
Ankoatra ny teny Ankatso ihany koa dia tsikaritra tamin’ny toerana maro teto an-drenivohitra ny fijalian-drano, ny faran’ny herinandro lasa teo iny. Toy ny eny Itaosy Atsimondrano iny izao, ohatra, dia velon-taraina noho ny fahatapahan-drano maharitra ela ireo tokantrano marobe. Manginy fotsiny ny kalitaon’ny fahadiovan’ny rano ampiasaina tato ho ato izay manopy mavo sahala amin’ny ranom-potaka.
Namoahana “Filazana Fikarohana” i Marco Randrianisa FIANTSOANA “ACTE ISOLÉS” (425) 2 mars 2021 Tsy hiara-dalana amin-dRavalomanana intsony ? FANAMBARAN’NY ANTOKO MFM (159) 2 mars 2021 Mikononkonona fanakorontanana ireo vehivavy RMDM ? HETSIKY NY VEHIVAVY 8 MARSA ANY DIEGO (72) 2 mars 2021 Jiolahy naman’i Del kely miisa fito voasambotra KIDNAPPING TAO AMBAKIRENY (70) 2 mars 2021 Voasoroka ny korontana nokasain’ ny RMDM hatao ANALAKELY - AMBOHIJATOVO (64) 2 mars 2021 Vehivavy iray maty tao Nosy Be, mitontaly 83 ireo marary CORONAVIRUS ATY DIANA (50) 2 mars 2021